Mpaghara Kildare Fáilte | Kpọtụrụ anyị
Kpọtụrụ County Kildare Fáilte
Maka ajụjụ niile gbasara njem nlegharị anya, biko kpọtụrụ njem nlegharị anya Kildare.
Njem njem Kildare na -enye ndị ọbịa nkọwa ebe ha ga -eleta, ihe ị ga -eme, ntụrụndụ mpaghara, ozi ebe obibi, na ụzọ ha ga -aga. ozi na akụkụ ndị ọzọ nke Ireland dịkwa.
Lelee broshuọ anyị n'ịntanetị
Ahịa na Ajụjụ Mgbasa Ozi
Njem nlegharị anya nke Kildare na ndị nta akụkọ na ndị nnọchi anya mgbasa ozi na -arụ ọrụ kwa ụbọchị ma nabata arịrịọ mgbasa ozi. Ọ bụrụ na ị bipụta ihe ọ bụla dị ka nsonaazụ nke echiche akụkọ, foto ma ọ bụ ọdịnaya sitere n'ime Kildare, biko mee ka anyị mara ka anyị nwee ike ịkekọrịta ọrụ gị n'ofe usoro mgbasa ozi anyị na-ekwu na daalụ.
Debanye aha ugbu a maka mkpali, ndụmọdụ njem, akụkọ na onyinye onye ọbịa!